XOG-WARRAN: Heshiiskii SOOMAALIYA – ITOOBIYA iyo wadaniyadda taban..!! - Caasimada Online
Home Maqaalo XOG-WARRAN: Heshiiskii SOOMAALIYA – ITOOBIYA iyo wadaniyadda taban..!!
XOG-WARRAN: Heshiiskii SOOMAALIYA – ITOOBIYA iyo wadaniyadda taban..!!
Maalin axad ah, taariikhduna ku beegneyd 16-ka bisha Juunyo, Ciidul Fidrigana ay laba ahayd waxaa booqasho rasmi ah oo aan hore loo shaacin Soomaaliya ku yimi Raisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed.
Marka laga soo tago in ay lama filaan ku noqotay dhammaan umadda Soomaaliyeed hadana waxa ay abuurtay dareen wanaagsan maadama booqashadani tusaale u ahayd halka uu dalkeenu gaaray tan iyo markii uu bilaabay dib u soo kabashadiisa.
Raisul Wasaare Dr Abiy Ahmed waxa uu noqday mas’uul dal madax ka ah kii ugu horreeyey ee booqasho rasmi ah ku yimaadda dalka tan iyo qaran jabkii dalku galay marka laga reebo Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.
Walow ay booqasho maalin qura ahayd, siiba saacado kooban, hadana labada dowladood waxa ay kala saxiixdeen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo ku qotomay ishkaashi dhaqan –dhaqaale iyo in laga wada shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa amniga mandiqadda iyo guud ahaan qaaradda.
Heshiiska qodob ka mida waxa uu dhigayey in labada dowladood ay wada maalgashadaan afar dekedood oo aan lagu xusin heshiiska kuwa ay noqonayaan.
Waxaa xusid mudan in dalka Itoobiya bad lahayn “Landlocked”, waa sababta keenta in walaaca ugu weyn ee ay dhinaca dhaqaalaha ka qabaan noqdo sidii ay ku heli lahaayeen dekeddo ay wax kala soo dagaan kana dhoofiyaan wax soo saarkooda ay dibedda u iibgeeyaan.
Hase ahaatee, qodobkaas waxa uu wadaniyad taban ku abuuray qeybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyo walia qaar ka mid ah mudeneyaasha golaha shacabka oo dowladda ku dhaliilay gelidda heshiiskaas.
Hagaag, weydiinta ay dadka indheer garadka ah qabeen ayaa ah, maxaa ku jabnaa qodobkaas, oo sababay in ay qeylo-dhaan iyo waa waawareey is qabsato goobaha ay bulshadu ku kulanto?
Jawaabta weydiintaas waa Wadaniyad Taban ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo “Negative Nationalism”.
Marka hore aan eegno macaha ereyadan; Wadaniyad (Nationalism), Wadaniyad Togan (Positive Nationalism), Wadaniyad Taban (Negative Nationalism), Markaa kaddib waxaan fahmi doonnaa sida ay bulshadeennu hadhkooda uga cararayaan “Being Paranoid).
Wadaniyad – Waxaa lagu micneeyaa dareenka ay dadku u hayaan sida jaceylka dalalkooda oo ay badanaa weheliso aaminaadda ah in uu ka fiican yahay kana muhiimsan yahay dalalka kale.
Wadaniyad Togan – Waa iyada oo darreenka ka dhasha wadaniyadda loo adeegsado dhinaca san..
Wadaniyad Taban – Waa iyada oo dareenka ka dhasha wadaniyadda loo adeegsado sida xun.
Dheefta/Faa’iidada Wadaniyadda Togan
Sida kor ku xusan haddii dareenka ka dhasha wadaniyadda loo isticmaalo sida ugu habboon ee saxda ah waxa uu dalka ka dhaxli karaa horumar dhinac walba ah iyada oo laga faa’iideysanayo xoogga iyo kartida muwaadiniinta, waxaa tusaale u ah sidii ay bulshada Soomaaliyeed uga qeyb qaateen horumarintii reer Miiga ee farta Soomaliga lagu bareyey iyo samata bixintii Umadda markii ay ku habsatay abaartii daba dheer iyo waliba masiibaddii ka dhalatay qaraxii Zoobe.
Khasaaraha Wadaniyadda Taban
Wadaniyadda Taban waxa ay horseedi kartaa dhibaato badan sida in ay bulshadu kala qeybsanto iyada oo laga faa’ideysanayo caadifadda kala sarreynta “Dalkeygaa ugu fiican”, waxa ay dalka ka dhiggi kartaa mid go’doosan oo aan dunida kale xidhiidh la yeelan karin waxa uuna caqabad ku noqon karaa gelidda heshiisyo caalami ah taas oo hoos u dhigeysa dhoofinta wax soo saarka dalka iyo maalgashiga dalka lagu sameyn lahaa. Sidoo kale waxa uu horseedi karaa dagaal.
Waxaa taas, dheer, wadaniyadda waxaa loo bedeli karaa mid maxalli ah oo waxaa isu adeegsan kara bulshada kuwada nool isla hal wadan oo qabaa’illo isu cunsuriyadeen kara! (Wadankeena waa tusaalaha kowaad).
Cawaaqib xumada ay dunida ku reebtay wadaniyadda taban
Wadaniyadda caadifadeysan waxaa lagu xasuustaa in ay ahayd sababtii kowaad ee uu ku dillaacay dalaakii kowaad ee dunida.
Waxaa ka abuurmay dhaq dhaqaaqii siyaasadeed ee hoggaamiyihii Jarmalka Adolf Hilter oo lagu xasuusto hadaladdiisii wadaniyadda cadiifadeysanaa ee uu ku kicin jiray dadka reer Jarmal:
Mustaqbalkeennu waa Jarmal. Maantayadu waa Jarmal. Tagtadayadu waa Jarmal. Caawa aan wacad marno, saacad walba, maalin walba, in aynu ka fekerno Jarmalka, qarankeena, dadkeena reer Jarmal. Daacad darro uma muujin kartid shay ku yeelay dareen iyo macno ku saabsan jiritaankaaga oo dhan.
Dagaalkaas,kii kowaad ee dunida, baaris ay sameysay waaxda cadaaladda Mareykanka waxa ay ku sheegtay in 8 Milyan ay ku dhinteen halka 37 Milyan ay waxyeelo ka soo gaadhay.
Heshiiskii Soomaaliya iyo Itooiya…..
Soomaaliya waa dal madax banaanidiisa iyo qarannimadiisa aan muran ku jirin, taas waxa ay ka dhigan tahay in uu heshiis la geli karo wadan walba oo dunida ka tirsan.
Heshiiskii dowladda Federal-ka ay la gashay dowladda Itoobiya axaddii waxa uu ahaa mid taarikhi ah oo furay albaab cusub oo is kaashi, wax wada qabsi ku dhisan, is ixtiraam ku jaan go’an xaaladda maanta ka jirta i